A ihu na Dictionary.com | Martech Zone
A Facelift maka Dictionary.com
Wenezde, August 23, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
A bụ m onye na-anụ ọkụ n’obi na-agụ akwụkwọ, mana egwu na nsụpe, akara edemede na ụtọ asụsụ. M gafere na Dictionary.com mgbe m na-enweghị ike ịchọpụta ihe okwu pụtara. Taa mgbe m gụrụ Chip si Quip on Plenary Snarks taa, amaghi m ihe heck ọ na-ekwu. Yabụ, m na-agagharị na Dictionary.com na ha nwere ihu ọhụụ. Ọ dị oke mma mana echere m na ha zuru m agba ahụ, n'agbanyeghị. (na-egwu egwu)
Ma m aghọtabeghị ihe Plenary Snark bụ. Ekwesịrị m ịga na Wikipedia iji chọpụta ihe na-adịghị mma. (ndumodu: zuo+ekwu). Eche m na ọ dịghị ka ihe ọchị mgbe ị dara ogbi.
Ma hey, SnAkes on a Plane di nma, huh?
Ndị ahịa na-alụ ọgụ azụ!
Nwere ike Grouper weghaara vidiyo vidiyo dị n'ịntanetị?
Aug 23, 2006 na 4:28 PM
Hey Doug, M pụtara ya dị ka a synonym maka "nza nke", ma na-ada ụdị dị ka "ụgbọelu". Obere oke ala na akara ngosi / mkpọtụ na akara ahụ, echere m.
Aug 23, 2006 na 5:02 PM
Nah, Chip - m na-agbalịkwa ịdị na-atọ ọchị. Ma ọ dịkarịa ala, amaara m ihe plenary pụtara ugbu a!